छिट्टै लन्च हुने तयारीमा दुनियाँको पहिलो फाइभ जी फोन, यस्ता छन् विशेषता | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
छिट्टै लन्च हुने तयारीमा दुनियाँको पहिलो फाइभ जी फोन, यस्ता छन् विशेषता
कात्तिक १३ गते, २०७५ - २०:५५
एजेन्सी । नेपालमा 4G सेवा पनि प्रभावकारी नभर्इरहेकाे सन्दर्भमा दुनियाँ 5G सेवाकाे तयारीमा जुटीसकेकाे छ । त्यसका लागि केही देशहरूमा 5G ल्याउने तयारी सुरु भइसकेको छ । खबरका अनुसार छिट्टै नै दुनियाँको पहिलो फाइभ जी फोन लन्च हुँदैछ । यसको सुरुवात प्रविधिमा अगाडि रहेको देश चीनले गर्दैछ ।
चीनको कम्पनी शाओमीले २५ अक्टोबरमा बेइजिङमा हुने एक कार्यक्रमका अवसरमा ‘एमआई मिक्स ३’ स्मार्टफोन लन्च गर्नसक्ने बताइएको छ । यो दुनियाँको पहिलो फाइभ जी फोन हुनेछ ।
लन्चभन्दा पहिले कम्पनीले यसको कुनै न कुनै जानकारी लीक गरिरहेको छ । हालसम्म आएको जानकारी अनुसार १० जीबी र्यामदेखि फाइभ जी सपोर्टसम्म ‘एमआई मिक्स ३’ लाई आकर्षक फिचरका साथ पेश गरिने बताइएको छ । नेपाल र भारतमा यसको सुरुवात कहिलेबाट हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी भइसकेको भने छैन ।
शाओमीका अनुसार, यसको १० जीबी र्याम भेरिएन्ट केही बजारमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ । यो फोन दुनियाँको पहिलो फाइभ जी सपोर्टवाला कमर्शियल स्मार्टफोन हुनेछ । साथै यसमा थि« डी फेशियल रिकग्निसन सिस्टम हुनसक्ने बताइएको छ । डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र हाई स्कीन रेस्योजस्ता फीचर्स पनि उक्त फोनमा हुनेछ ।
फोनमा २४ मेगापिक्सलको ड्यूल फ्रन्ट क्यामेरा हुने बताइएको छ । यो फोनको सुरुवाती मूल्य ३ हजार ७९९ चिनियाँ युआन अर्थात् करिब ६५ हजार रुपैयाँ पर्नेछ ।
कात्तिक १३ गते, २०७५ - २०:५५ मा प्रकाशित
धनकुटामा पनि टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा
फेसबुकले ल्याउन लागेको डिजिटल मुद्रा के हाेला ?
किसानले बनाए रुख चढ्ने मोटरसाइकल, कति होला स्पीड ?
नेपाल टेलिकमले ल्यायो एकदमै सस्तो अफर
के पोर्नको बलमा टिकेको छ इन्टरनेट ?
मस्तिष्क पढ्ने चिप बन्याे, अब साेचाइ अनुसार स्मार्टफाेनमा नियन्त्रण गर्न सकिने
अबदेखि ह्वावेई फोनमा फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम एप नहुने
टेलिकमले गर्याे पुरानो बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टेलिकमको ‘रिपब्लिक डे अफर’, यस्ताे छ सुविधा
अब हुवावे मोबाइलमा गूगल प्ले एप्स नचल्ने, गूगलद्धारा हवावेलाई एन्ड्रोयड सर्पोट बन्द गर्ने घोषणा
टेलिकमको एफटीटीएचमार्फत उच्च गतिको डाटा र भ्वाइस सेवा सुरु, कसरी सुचारु गर्ने ?
5 G लन्च भन्दा पहिले नै रुसले गर्यो यस्तो डरलाग्दो संकेत !
श्रीलंकाले लगायो सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध